खस्किएको सुशासन र अख्तियारको गुमेको साख : भ्रष्टाचार रोक्न नयाँ कानून आवश्यक छ त ? | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण खस्किएको सुशासन र अख्तियारको गुमेको साख : भ्रष्टाचार रोक्न नयाँ कानून आवश्यक छ त ?
on: June 09, 2019 लेख | दृष्टिकोण
पछिल्लो समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको साख धेरै नै गिरेको छ । आयोग गठन भएको समयमा यसको जति भरोसा र विश्वास थियो, त्यस्तो विश्वास र भरोसा हाल आएर धेरै नै तल झरेको छ । २०५० को दशकमा आयोगले जनताको धेरै नै विश्वास जितेको थियो । त्यतिबेला अख्तियारको केही कमीकमजोरी देखिएको भए पनि त्यसलाई खासै वास्ता गरिएको थिएन । त्यतिबेला राजनीतिक पार्टीका नेता भनिएको थिएन, उच्चस्तरका कर्मचारीलाई पनि छाडिएको थिएन । समष्टिमा भन्नु पर्दा छानबिन गर्दा दोषी देखिएकालाई मुद्दा चलाउने हिम्मत त्यतिबेलाका अख्तियारका पदाधिकारीहरूले गरेका थिए । ती पदाधिकारीमाथि एउटै गुनासो के थियो भने एउटा राजनीतिक पार्टीका नेतालाई मात्र अख्तियारले बढी आँखा लगाइरहेको छ । हुन त त्यसबेलाको अर्को ठूलो पार्टीका धेरै नेतामाथि पनि बयान गराउने, १३ पाने फारम भर्न लगाउने जस्ता कार्य अख्तियारले गर्दै आएको थियो । तर, मुद्दा चलाउने बेलामा अख्तियार एउटा पार्टीका नेता माथि मात्र बढी केन्द्रित भएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि सो समयमा अख्तियारको विश्वास हालको जति गिरेको अवस्थामा थिएन । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तप्रति जनताको धेरै नै सम्मान थियो । उनीहरूले देशमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा केही मात्रामा देखाएका थिए । भ्रष्टाचार र सुशासन एक अर्काका शत्रु हुन् । देशमा भ्रष्टाचार छ भने सुशासन हुँदैन । यदि सुशासन छ भने भ्रष्टाचार पनि नगन्य छ वा छैन भन्ने बुझ्नु पर्छ ।
सुशासन बनाउने भनेर जति सरकारी व्यक्तिहरूले उल्लेख गरे पनि अख्तियारले आफ्नो छवि नसुधारेसम्म यसमा प्रगति भएको मान्न सकिँदैन । अख्तियारको छवि सुध्रियो भने सुशासन पनि संगै अगाडि बढ्छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केही दिनअघि बजेट भाषण गर्दा सुशासनलाई सर्वोपरी प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए । भाषणमा ‘शासकीय स्वच्छता र सुशासनलाई सर्वोपरी प्राथमिकतामा राखिने’ भनिएको छ । सरकारले सार्वजनिक सेवामा सुशासन कायम राख्ने गरी नीति ल्याएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । बजेट भाषणका धेरैजसो विषय नीति नै हो । यसमा भनिएको ‘शासकीय स्वच्छता र सुशासनलाई सर्वोपरी प्राथमिकता राखिने’ भन्ने विषय पनि नीति नै हो । सरकारले लिएको नीतिलाई कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भएका कारण त्यस विषयलाई सरकारले पालना नगरे पनि जनताले केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । बजेट भाषणको कुरा पालना भएन भनेर न त अदालतमा मुद्दा हाल्न सकिन्छ, न त अन्य उपाय नै छ । त्यसैले यस्ता नीतिगत विषयमा जनतालाई जति झुक्याउन पनि सकिन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । सरकारले ‘शासकीय स्वच्छता र सुशासन प्रवद्र्धनलाई सर्वोपरी प्राथमिकता राख्ने’ भनी गरिएको प्रतिबद्धताको बारेमा एक इन्च पनि प्रगति हुन्छ भनी विश्वास गर्ने ठाउँ छैन ।
बजेट भाषणको बुँदा नम्बर २५२ मा भनिएको छ, ‘नागरिकलाई मानव अधिकारको आधारभूत पक्षमा सजग र क्रियाशील बनाउन जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । संवैधानिक आयोगहरूको कार्य प्रभावकारी बनाउन क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । संवैधानिक निकायहरूलाई साधन स्रोत सम्पन्न गरी क्षमता विकास गरिनेछ ।’ विक्रम संवत् २०५० को दशकमा अख्तियार जति प्रभावकारी थियो, अहिले त्यसको २५ प्रतिशत पनि छैन भन्दा कुनै फरक पर्दैन । अख्तियार त्यतिबेला अहिलेको भन्दा साधन स्रोतले कमजोरी नै थियो । त्यसबेलाको तुलनामा हाल अख्तियार भौतिक तथा अन्य साधनले धेरै नै बजबुद छ । तर पनि पहिलेको तुलनामा किन क्रियाशीलतामा कमी आएको छ ? यसको मतलब साधन स्रोतले सम्पन्न गर्दैमा÷हुँदैमा संवैधानिक आयोगहरूले सक्रियता देखाउँछन् भन्नेमा विश्वास गर्न सकिँदैन । नक्कली प्रमाणपत्र र घूस काण्डमा मात्र अल्झिएको अख्तियारले हाल भइरहेको साधन स्रोत प्रयोग गरेर पनि धेरै गर्न सक्छ । त्यसैले साधन स्रोत बढाउन भन्दा पनि सरकारले संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र छोड्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । अख्तियारलाई सरकारले स्वतन्त्र छोडोस् उसले धेरै गर्न सक्छ र गर्छ पनि । अख्तियारलाई स्वतन्त्र छोडेको खण्डमा सुशासन आफै बलियो हुँदै जान्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त राखी सुशासन कायम गर्नको लागि सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ जारी गरिएको छ । यो ऐन देख्दा कार्यान्वयनमा भए पनि खासमा यसलाई पालना गरिएको पाइएको छैन । यो ऐन जारी गर्नुको उद्देश्यमा सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, पारदर्शी, जवाफदेशी, समावेशी बनाउन रहेको छ । यसैगरी सार्वजनिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन बनाउन तथा सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो हुने गरी अपनाउनु पर्ने विधिलाई समेटि यो ऐन जारी गरिएको हो । यसमा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने आधारहरू, सरकारले अख्तियार गर्ने नीतिहरू, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखका जिम्मेवारीको बारेमा उल्लेख गरिएका छन् । यो ऐनमा भनिएबमोजिम कार्य गरेमा मात्रै पनि सार्वजनिक निकायमा देखिएका समस्या उल्लेख्य मात्रामा समाधान हुन पुग्छ । बजेट भाषणको बुँदा नम्बर २४८ मा ‘भ्रष्टाचार रोक्न कानूनी सुधार गर्दै नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने’ भनेर उल्लेख गर्नुको साटो ‘सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ’ भनेको भए बढी सार्थकता हुने थियो । सो ऐनमा भनिए जस्तो मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भने साँच्चै नै सार्वजनिक निकाय भ्रष्टाचारमुक्त भई सुशासन कायम अवश्य रहनेछ ।
भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन कायम गर्न कानूनमा सुधार गर्न आवश्यक नै छैन । इच्छाशक्ति छ भने हाल भइरहेको कानून नै पर्याप्त छ । इच्छाशक्ति छैन भने जतिसुकै कानून निर्माण गरे पनि त्यसलाई लागू नगर्ने हो भने केही हुनेवाला छैन । बजेट भाषणमा गरिएको त्यस्तो व्यवस्थाले सरकार सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचार विरोधी हो है भन्ने भ्रम मात्र फैलाएको छ । यसमा जनताले विश्वास गर्नेवाला छैनन् । वास्तवमा भन्ने हो भने सुशासन ऐनले हरेक विषयलाई समेटेको छ । यसलाई अक्षरशः पालना गरेमा देशमा आर्थिक विकास बढेर जान्छ, सुशासन निश्चित छ, भ्रष्टाचार धेरै मात्रामा घट्नेछ । मन्त्रिले आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने बारेमा जान्नको लागि सुशासन ऐन एक पटक पल्टाउनै पर्छ । मुख्य सचिवले यसलाई गहन रुपमा लिनै पर्छ । सचिवले मन्त्रालयलाई हाँक्नको लागि सो ऐनको दफा ११ लाई हुबहु लागू गर्नु नै पर्ने हुन्छ । विभागीय प्रमुखले दफा १२ अध्ययन गरी त्यसलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । कार्यालय प्रमुखले दफा १३ लाई गहिरो रुपमा अध्ययन गरी सेवाग्राहीलाई उचित सेवा गर्नु नै पर्ने हुन्छ । कानूनमा गरिएका ती व्यवस्था अनिवार्य हो । यसो गर्न सकियो भने किन चाहियो नयाँ कानून ?
अख्तियारद्वारा दुई जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर